तिम्रो दूधको भारा कसरी तिर्नु म ? लाग्ने भए मेरो आयु थपिदिन्थेँ आमा’ भन्दै आमाको नाममा स्टाटस लेखेर पोर्चुगलबाट सधैंका लागि बिदा भए सुरत – Gazabkonews
काठमाडौँ । २४ घण्टा अगाडि फेसबुकमा ‘मिल्ने भए दुःख हटाइ खुशी किन्थेँ आमा, आफ्ना को हुन्, पराइ को हुन्, सबै चिन्थेँ आमा। तिम्रो दूधको भारा कसरी तिर्नु म? लाग्ने भए मेरो आयु थपिदिन्थेँ आमा’
बझाङका एक युवाले बिहीबार फेसबुकमा यही स्टाटससहितको एउटा तस्वीर शेयर गरे। यही पोस्ट उनको जीवनको अन्तिम बचन हुन पुग्यो। अर्थात् बझाङका युवा सुरत कुँवर अब कहिल्यै फर्किने छैनन्।
बझाङबाट पोर्चुगn पुगेका कुँवर अब कहिल्यै नफर्किने बाटो लागेका हुन्। पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा आफू बसेको छात्राबासमै बझाङका सुरत कुँवरले दे,ह,त्या,ग गरेका हुन्।
पोर्चुगललाई कर्मथलो बनाउँदै आएका कुँवर शुक्रबार नेपाल जाने तयारीमा थिए। उनले स्टाटस शेयर गरेर आफू बस्दै आएको होस्टेलको चार तलाबाट हा’म’फा’लेर दे,ह,त्या,ग गरेका हुन्।
एउटै छात्राबासको कोठामा बसेका साथी र परिवारका सदस्यलाई दे,ह,त्या,ग गर्ने आफ्नो बोलि अन्तिम भनेर भनेपछि कुँवरले साथी भान्सामा गएको मौका छोपी हामफालेको पोर्चुगल प्रहरीले जानकारी दिएको छ।